Athlọ ịsa ahụ na ụlọ mposi maka ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu | Onyeka Onwenu
Arịrịọ arịrịọ onye na -ere ahịa
Bath na ịsa ahụ
Ndị nwere iko
Ndị ji akwa nhicha ahụ
Ihe nhicha windo - Ihe nhicha iko
Igwe okpomọkụ ahụ Hooks
Akpụcha ajị agba - mejupụtara enyo
Ngwa ụlọ mposi
Akwa mkpofu maka uwe ụmụ nwanyị
Ihe nkpuchi iko
Akwụkwọ Towels Dispensers
Akwụkwọ Towels Starter ets
Ilelọ mposi setịpụrụ
Mposi ụlọ mposi
Ilelọ mposi mpịakọta ejiri
Igwe ịsa ahụ na akụkụ
Ndị na-akwụ ụgwọ Bidet | Afanyekwa aka ịsa aka gị
Ihe ntụgharị divert
Nkedo brackets maka aka aka
Nghọta brackets maka afanyekwa aka
Ilelọ mposi na-afanye Aka Aka
Ebe mmiri ịsa mmiri | Ịsa mmiri taps
Nyere ma kewaa taps
Sink igwekota taps
Athlọ mposi Textiles
Ụlọ ịsa ahụ na-eweta
Akpa akwa akwa akwa
Ie WillieJan® NL
Marplast onye mbubata
✅ Ego azụ nkwa
✅ Ọrụ nke Ọkachamara
Ngwaahịa ndị ama ama
WillieJan Radiator akwa nhicha nkụ 90MW - White - mkpara 5 - 46 cm - mgbakwunye radiator - Na -enweghị olulu
Obi ekele 4.75 nke 5
€ 53.00 gụnyere VAT
Ị na -asa ahụ n'ụtụtụ ma mgbe ị kpọrọ nkụ ị na -achọpụta na akwa nhicha gị ka na -arapara na mmiri? Mgbe ahụ, ogbe a bụ ihe ngwọta maka gị. Kpọgidere akwa nhicha mmiri gị site na radiator gị, ha ga na -adịkwa ọkụ mgbe niile. A na -edozikwa nke ọma na akwa nwere ike jikọta ya na radiator ime ụlọ ịwụ na -enweghị olulu.
WillieJan Radiator akwa nhicha nkụ 950W - White - 1 mkpanaka - 46 cm - mgbakwunye radiator - Na -enweghị mkpọpu ala
Obi ekele 5.00 nke 5
€ 38.00 gụnyere VAT
Ị na -asa ahụ n'ụtụtụ ma mgbe ị kpọrọ nkụ ị na -achọpụta na akwa nhicha ahụ gị ka dị nro na mmiri? Mgbe ahụ, ogbe a bụ ihe ngwọta maka gị. Kpọgidere akwa nhicha gị site na radiator gị ka ọ na -ekpo ọkụ ma na -adịkwa mgbe niile. A na -edozikwa nke ọma na akwa nwere ike jikọta ya na radiator ime ụlọ ịwụ na -enweghị olulu.
WillieJan Divert Kpatụ ịsa ahụ - Chromed Brass - Njikọ nha 3 x 1/2 ″
€ 33.00 gụnyere VAT
Easy jikọọ 1 ngwaahịa 2 mgbata. Nwere ike ịgbanwe mgbata ahụ (site n'otu nbanye gaa na nke ọzọ). Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmiri ịsa mmiri ọ bụla na Netherlands na Belgium nwere eriri 1/2 to iji kpuchie ya. Younwere ike itinye eriri ntụgharị dị n'etiti ka i nwee njikọ 2. Biko tụọ ya tupu ị nye iwu (lee foto nke nha)
Marplast akwụkwọ nhicha ahụ A59211 - ọcha - ikike - mpempe akwụkwọ 600 - maka C, Z na akwa nhicha agbakọ
€ 30.00 gụnyere VAT
Akwụkwọ towel dispenser na nnukwu ikike ruo 600 Ibé akwụkwọ. Nke a dabara ma akwa nhicha nke Z, C na nke ejiri apị apị apị apị apị apị apị.
Marplast akwụkwọ nhicha ahụ A83010ENE - Nwa - ikike - Ibé akwụkwọ 600 - maka akwa nhicha Z, C na V
€ 43.00 gụnyere VAT
Large ikike akwụkwọ towel dispenser maka ruo 600 Ibé akwụkwọ. Ọ na-adabara ma akwa nhicha akwụkwọ Z, C na V nwere akwa apịachi nke ruru 12 cm na obosara nke 25 cm.
WillieJan Radiator akwa nhicha nkụ 940W - White - 1 mkpanaka - 36 cm - mgbakwunye radiator - Na -enweghị mkpọpu ala
Obi ekele 4.80 nke 5
Marplast ncha dispenser A71401NE - Professional quality - Black na uzo - 550 ml - Adabara ọha na eze
Nnọọ ọkachamara ncha dispenser, mfe mejupụta site agbapụtara ncha n'elu.
WillieJan Towel ogbe Multi igwe anaghị agba nchara
€ 73.00 gụnyere VAT
Large multifunctional akwa akwa akwa nke ejiri mma hichaa igwe anaghị agba nchara. Ọ dịghị ihe na-erughị mkpara 7 kpọgidere akwa nhicha gị niile na / ma ọ bụ tinye ha n'elu. Enwere ike itinye akwa nhicha ahụ na mgbidi ka ọ bụrụ na akwa nhicha gị dị mma ma nwee ike ikuku ma kpoo.
WillieJan nnukwu akwa nhicha 7305 - Nchara nchara nchara - 60 cm - Multifunctional
Akwụkwọ akwa akwa WillieJan akwa Z-anọ - Warara warara - cellulose - 3 x 200 iberibe
€ 13.00 gụnyere VAT
Akwụkwọ nhicha ahụ nwere ply 1 dị ọcha nke ejiri cellulose dị ọcha. Ndị a na-apịaji ugboro abụọ ka azụ wee dịrị naanị 2 cm n'obosara ka ha wee banye na ndị a na-akpọ ndị na-enyefe ala. Emegheghi, akwa nhicha ahụ nwere okenye nke 8 x 24 cm nke mere na ha buru oke ibu iji banye otutu mmiri.
Onye na-ejide mpịakọta WillieJan Midi - Ihe nkesa akwụkwọ nhicha - Matt igwe anaghị agba nchara - Ogo ọkachamara
Igwe anaghị agba nchara maka Mịdi mpịakọta nke akwụkwọ nhicha nwere nnukwu ikike maka mpịakọta akwụkwọ ruru mita 300 dabara na mpịakọta site na isi.
WillieJan akwa akwa akwa ọtụtụ - dị warara azụ - 2 ply - Cellulose adịchaghị - 4 x 150 iberibe
Dochie edemede 99535A300, dabara na ndị na-ekesa akwa nhicha akwụkwọ na-emighị emi sitere na Marplast, n'etiti ndị ọzọ; Akwa nhicha akwụkwọ 2 siri ike nke ejiri cellulose dị ọcha mee. A na -apịaji ihe ugboro abụọ ka azụ ya dị naanị 2 cm n'obosara ka ha wee dabara na ndị na -ekesa miri emi. Mgbe a na -ekpughere ya, akwa nhicha ahụ nwere ogo nke 8 x 20.7 cm ka ha wee buru ibu nke ga -amịrị nnukwu mmiri.
WillieJan akwa akwa akwa ọtụtụ - dị warara azụ - 2 ply - Cellulose adịchaghị - 25 x 150 iberibe
Dochie edemede 99535A3DS, dabara na ndị na-ekesa akwa nhicha akwụkwọ na-emighị emi sitere na Marplast, n'etiti ndị ọzọ; Akwa nhicha akwụkwọ 2 siri ike nke ejiri cellulose dị ọcha mee. A na -apịaji ihe ugboro abụọ ka azụ ya dị naanị 2 cm n'obosara ka ha wee dabara na ndị na -ekesa miri emi. Mgbe a na -ekpughere ya, akwa nhicha ahụ nwere ogo nke 8 x 20.7 cm ka ha wee buru ibu nke ga -amịrị nnukwu mmiri.
WillieJan Afanyekwa aka aka ya HD2058 - ABS - Nwa
€ 18.00 gụnyere VAT
Nice kọmpat afanyekwa aka ịsa ahụ. Site na ịpị ụlọ mposi, mmiri na-apụta ma ị nwere ike ịsacha ahụ dị ala n'ụlọ mposi.
WillieJan Afanyekwa aka ịsa ahụ Set HD035 - ABS - Black - Sprayer, Gbasara sooks na Nkedo mgbodo
€ 26.00 gụnyere VAT
Mara mma kọmpat afanyekwa aka ịsa ahụ, zuru ezu na gburugburu sooks na mgbidi arịọnụ mgbodo. Site na ịpị ụlọ mposi, mmiri na-apụta ma ị nwere ike ịsacha ahụ dị ala n'ụlọ mposi.
WillieJan Knijp aka ịsa ahụ Set HD035 – ABS – Black with Chrome – Sprayer, PVC Hose and Hanging bracket
€ 28.00 gụnyere VAT
WillieJan ịsa ụgbọ okporo ígwè 16904 - igwe anaghị agba nchara tube
€ 23.00 gụnyere VAT
Ogwe slide ịsa ahụ dị iche nwere ihe njide ịsa ahụ na-amị amị yana braket mgbago mgbidi nke igwe anaghị agba nchara chrome na ABS.
WillieJan Shower rail 16903 - igwe anaghị agba nchara - ya na efere ncha
Ogwe ihe mmịfe ịsa ahụ dị iche nwere ihe njide ịsa ahụ na-amị amị, efere ncha na braket mgbago mgbidi mere nke igwe anaghị agba nchara chrome na ABS.
WillieJan Shower rail 16902 - igwe anaghị agba nchara - yana isi ihe ndozi
WillieJan ịsa ụgbọ okporo ígwè 16901 - igwe anaghị agba nchara tube
Ndụmọdụ & Akụkọ
Kedu ihe ị ga-eme gbasara isi ịsa ahụ na-asọ asọ?
13 October | Ndụmọdụ banyere ịdị ọcha
Kedu ihe ị ga -eme gbasara isi ịsa mmiri na -asachapụ? Ị nwere ike gụọ ihe ị ga -eme maka nke a n'isiokwu a. O di nwute, nke a nwere ọghọm na ọ bụrụ na ị gbanyụọ pọmpụ ahụ, mmiri dị n'ime ụlọ n'ihu ...
Akwụkwọ towel dispensers azụ na ngwaahịa
21 March | Ndụmọdụ banyere ịdị ọcha
Akwụkwọ towel dispensers azụ na ngwaahịa Ebe ọ bụ na ụnyaahụ e nwere ngwaahịa nke akwụkwọ towel dispensers ọzọ. Mee ọsọ ọsọ n'ihi na ugbu a enwere nnukwu ọchịchọ maka ngwaahịa ndị na-ebelata ihe ize ndụ nke ịnyefe ọhụụ ọhụụ. Nke a metụtara ngwaahịa anyị na-ebu; Ngwa ncha; Saa aka na ...
Adighi ike nje Corona
04 March | Ndụmọdụ banyere ịdị ọcha
Nsogbu dị nso n'ihi nje Corona N'ihi nje corona ma ọ bụ nje COVID-19, a na-achọsi ike maka ngwaahịa ndị na-ebelata ihe ize ndụ nke ibute ọrịa. N'ihi mkpa dị elu, mmepụta enweghị ike ịnagide na 2020. Ka ọ dị ugbu a, ina achọla ntakịrị ma anyị na-atụ anya ka eweghachite ngwaahịa nke ihe ndị a n'oge adịghị anya ...
Ebe nghọta a mposi mpịakọta njide
24 January | Ebee ka m ga-ekowe ụlọ ịsa ahụ m?
Ebe a ga-edowe onye na-ebu mposi mposi enweghị iwu na-enweghị ebe a na-ekowe akwụkwọ mposi. Ihe kachasị mkpa bụ na mgbe ị na-anọdụ ala mposi, mpịakọta ahụ ga-eru ya nke ọma ma enwere ike wepu ya mgbe ọ nọ ọdụ. Okwesighi ịbata n'ụzọ. Na omume, nke a pụtara na ọ kachasị mma iwepu ntụ nke ...
Tinye akwa mkpuchi n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ
21 December | Ndụmọdụ maka ime ụlọ ịwụ ahụ
Cingtụkwasị wodrobu nko n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ ị nwere a nwere obere ịsa ahụ ma ọ bụ ime ụlọ ịwụ. N’agbanyeghi nke a, ichoro ka ichoro uwe gi nke oma mgbe ị na-asa aru ma obu mmiri. Ezigbo echiche bụ itinye akwa mkpuchi n'ime ime ụlọ ịsa ahụ. Nwere ike ị paya ntị na mgbe ịzụrụ na / ma ọ bụ wụnye nko wodrobu gị ...
ncha ntụtụ maka na mgbidi
06 December | ngwaahịa
Zụta ihe eji etinye ncha ọhụụ maka mgbidi ahụ? Maka mgbidi ọhụrụ nke ncha ncha ị bịara ebe kwesịrị ekwesị na WillieJan. Anyị nwere ma nchara nchara na akwa ncha eji eji rọba eme ihe maka mgbidi. Ndị na-ere nchacha mgbidi maka ụdị dị iche iche na agba. Ma nke onwe ma nke kpụ ọkụ n'ọnụ ọkachamara were ....
Ndụmọdụ na Akụkọ
Nzipu na ozi ugwo
Akwụkwọ ikike & Mkpesa
Cartzụ ahịa 🛒
2004 - 2022 © WillieJan | WillieJan® bụ ụghalaahia edenyere nke Bathweb
Ekele nke www.williejan.com na Webshop Keurmerk Nyocha ndị ahịa bụ 9.1 / 10 dabere na nyocha 416.
Na ụgbọ ibu azụmahịa gị